Ny Marvel sy DC Art vita amin'ny vera voaloto nataon'i Van orton design | Famoronana an-tserasera
Ny ekipa mpamolavola noforonin'ireo mirahalahy kambana monina ao Tutín, Italia. Iza no nom de guerre Famolavolana van orton, mamorona zava-kanto rehetra miaraka amina fironana fitaratra voaloto amin'ny fomban'ny afisy sarimihetsika. Aiza maka sary nomerika amin'ny fampiasana nomerika endri-tsoratra malaza y seho isaky ny sarimihetsika. Van orton design dia manolo ny olo-masina sy ny sary masina ara-pivavahana amin'ny kolontsaina pop toa ny Rakoto, Ilay vazivazy y Jack burton, ny fampifangaroana azy ireo amin'ny zavakanto nentim-paharazana dia mahatonga azy ireo tsy mampino.
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mitondra anao ny Marvel sy DC Art noforonin'ireo mpirahalahy kambana, ny kilasin'ny karazana foronina, ny hetsika ary ny nofinofy momba ny siansa, izay nanampian'i Van Orton singa mahaliana ho an'ny fototry ny volavola, izay toa mitovy amin'ny azy ireo boky fandokoana, mihoatra ny vera miloko mahazatra mampatsiahy an'i Eropa amin'ireo katedraly lehibe. Ireo safidy famolavolana ireo dia manampy amin'ny toe-po malefaka sy nostalgika, ary mampisaraka azy ireo (na dia ny poster Batman ohatra aza dia manana fitoviana amin'ny asan'ny artista malaza Gilbert & George). Ny fitambaran'ireo tsipika mainty manify sy matevina (mamerina ny firaka ampiasaina mba hiarovana fitaratra miloko) dia misy karazany maro prisma miloko, izay mitondra kalitao tokana sy madiodio ihany koa izay tsy azo atao raha tsy amin'ny famolavolana nomerika.
Afaka atao ianao mividy ny afisinao (miloko na tsia) avy amin'i Van Orton Design eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny Marvel sy DC Art vita amin'ny vera namboarin'i Van orton design